Mogadishu Journal » Real Madrid oo ku guuleysatay koobka UEFA Champions League
Naadiga Real Madrid ee ka dhisan dalka Spain ayaa markii saddexaad ku guulaysatay koobka UEFA Champions League kadib markii ay 3-1 uga badisay kooxda Liverpool kulankii finalka ee magaalada Kiev ka dhacay.
Real Madrid ayaa noqotay kooxdii ugu horaysay ee intii magaca UEFA Champions league loo bixiyay tartanka kooxaha Yurub saddex xili ciyaareed oo xiriir ah ku guulaysatay koobkan.
Weeraryahankii ay ku tashanayeen naadiga Liverpool Mohamed Salah ayaa ciyaarta qeybteedii hore dhaawac ka soo gaaray waxaana laga saaray ciyaarta isagoo ilmeynaya,sidoo kale waxaa dhaawac soo gaaray loogaga saaray daafaca Real Madrid Carvajal.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay goolal la’aan hase yeeshee markii la isku soo laabtay ayaa goolka koowaad ayaa weeraryahanka Real Madrid Karim Benzema goolka furitaanka ugu dhaliyay qalad uu sameeyay goolhayaha Liverpool ee Loris Karius laakiin Sadio Mane ayaa u barbareeyay kooxda Liverpool.
Ciyaarta ayaa waxaa soo gabagabeeyay Gareth Bale oo bedel ku soo galay isla markaana buuxiyay booskii Isco isagoo dhaliyay gool la yaab leh kana dhigey ciyaarta 2-1.
Balse waxa uu ciyaarta hurdo u direy daqiiqadii 83aad kadib markii uu laad meel dheer ka soo toogtay ay ka baxsatay goolhaye Loris waxayna Madrid ku badisay 3-1 .
Naadiga Real Madrid ayaa markii 13aad ku guuleystay koobka horyaalada Yurub iyadoo saddex jeer oo isku xigtana ku guuleysatay koobkan.